जुलाई ८ मा एनआरएनए अष्ट्रेलियाको निर्बाचन हुने
नेपाली भिजन । दूई बर्षमा एक पटक हुने गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको अधिवेशन तथा निर्बाचन जुलाई २०१७ मा हुने भएको छ । राष्ट्रिय व्यापि निर्बाचन जुलाई ८ मा हुने भएको छ भने अधिवेशन जुलाई २२ मा हुने
नेपाली भिजन । गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाले आगामी १७–१९ का लागि साधारण सदस्यता बितरण तथा नविकरण खुल्ला गरेको छ । नबिकरण तथा नयाँ सदस्यता अनलाईन अर्थात संघको वोईबसाई बाट लिन सकीने संघले जनाएको छ ।
अस्ट्रेलियामा प्रवचन दिंदै डा. योगी
नेपाली भिजन । पश्चिम सिड्नीको मार्सडनपार्कमा अवस्थित एक मस्कमा हिन्दू, मुसलमान, क्रिश्चयन, सिख लगायतका धर्मावलम्बिहरु एकै ठाउँ बसेर प्रवचन कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन् । फरक धर्ममा बिश्वास राख्ने
नेपाली भिजन । सिनेटर श्याम डेस्टीयारीले आफ्नो सम्पर्क कार्यलय प्यारामाटामा सारेका छन् । अष्ट्रलियन राजनीतिमा निक्कै सक्रिय र चर्चा कमाएका सिनेटर श्यामले नयाँ कार्यलयको उद्घाटन सहित बार्बीक्यू कार्यक्र
एनएसडब्लुका मुख्यमन्त्री बार्डको राजनीतिक सन्यास
नेपाली भिजन । अष्ट्रेलियाको राजनीतिमा निक्कै चर्चा कमाएका न्यू साउथ वेल्सका प्रिमियर माईक बार्डले एनएसडब्लु राज्यको प्रिमियर पदबाट राजीनामा गर्दै पूणैरुपमा राजनीतिबाट सन्यास लिने घोषणा गरेका छन । आज द
परराष्ट्रमन्त्री डा. महतको सम्मानमा एनपिसीसीएको रात्रिभोज
सिड्नी, नेपाली भिजन । माननिय परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकास सरण महतको सम्मानमा नेपाली जनसम्पर्क समिति अष्ट्रेलियाले रात्रिभोज तथा भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । २५ नोभेम्बर, २०१६ शुक्रबार साँझ हेरीसप
परराष्ट्रमन्त्री आज अष्ट्रेलिया आउंदै
नेपाली भिजन, सिड्नी । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य, नेपाली राजनीतिमा प्रभावशालि नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री माननिय डा. प्रकाश सरण महतले आजबाट अष्ट्रेलिया को भ्रमण गर्नु हुने भएको छ । माननिय डा. महत